Mgbakọ Mgbakọ Circuit - PCBFuture
Okwu okwu: PCB emeputa, PCB Assembly service, Nzukọ sekit sekit
PCBFuture bụ ọkachamara PCB & PCBA si China. Anyị na-tumadi awade elu-nkenke otu-n'akụkụ, abụọ-n'akụkụ multi-oyi akwa PCB, Ikanam aluminum PCB, mgbanwe PCB, mmiri ị nweta PCB Manufacturing na PCB Assembly ọrụ. PCBFuture ka webatara elu akụrụngwa na ike & ụda management usoro. Ka ọ dị ugbu a, Anyị agafeela asambodo nke sistemụ mba ofesi dịka ISO 9001: 2008. Anyị nwere ngwongwo nke zuru ụwa ọnụ na ndị na-eweta ya.
Ihe mere anyị ga-eji họrọ mgbakọ ndị bishọp anyị ga-ebipụta:
PCBFuture nwere usoro ịzụpụta ihe tozuru etozu ma dị irè na-arụ ọrụ igodo nke nzukọ PCB na ọnụ ala dị ala, nwere ndị otu ọkachamara maka ọrụ ịzụ ahịa na njikwa PCB nke ndị ahịa anyị.
Anyị na-enye Elu (SMT), Thru-Hole (THT) na ngwakọ nke ha abụọ. Anyị na-enyekwa otu ma ọ bụ akụkụ ihu abụọ.
Anyị nwere ikike ịhazi akụrụngwa na-abata, njikwa usoro, yana nnwale dị mma, ma nwee ike ịnye gị ọrụ kacha mma PCB site na obere ogbe na mmepụta ihe. N'oge PCB nwụnye usoro, ma ọ bụrụ na e nwere ntụpọ metụtara PCB n'ichepụta, anyị injinia ga-akọ a DFM akụkọ.
Anyị ga-ezitere gị ọnụ BOM site na email n'ime awa 24.
Na anyị BGA mgbali ịgbado ọkụ ọrụ, anyị nwere ike n'enweghị wepu na-ekwesịghị ekwesị BGA, mgbali-Weld ya, na mgbe ahụ na-etinye ya azụ na PCB n'ụzọ ziri ezi. Ọ na-efu ọnụ.
Anyị nwere ike ịnye:
2-32L site-onu osisi & HDI
Nnukwu osisi mbadamba
Agbakwunyere eguzogide osisi
Semiconductor ule ngwaahịa
Okpokoro ọla kọpa dị arọ
2-6L metal isi osisi
2-8L Flex board & isiike-Flex osisi
Emechara ngwaahịa ule
Ọrụ ụlọ igbe
Sourcing nke components na zuru PCB nzukọ
Anyị na-enyekwa ọrụmetụtara ndozi PCB na imeghari na ule elektrọnik. Ngwa anyị na usoro nzukọ na-agbaso ụkpụrụ IPC, MIL-Spec, RoHS 5 na 6.
N'ime afọ 10 dịka onye ndu ụlọ ọrụ, PCBFuture bụ otu n'ime ndị PCB nwere ahụmahụ na China. Anyị nwere obi ụtọ ịmepụta ngwaahịa dị elu, ma nye ebe ọrụ 200 na-arụ ọrụ nchekwa ma nwee ọganihu.
Dịka onye otu na-eduga PCB n'ichepụta na nzukọỌrụ (PCBA), PCBFuture gaba n'ihu na-enwe ihe karịrị afọ 10 nke ahụmịhe injinia na ọrụ nrụpụta kọmputa (EMS) iji nye nkwado maka ndị ahịa ndị ọzọ. Anyị kpebisiri ike ịghọ onye ndu na ọrụ njikọ eletrọniki pụrụ iche.